ईमेज च्यानलमा ‘नेपाल्स सिङ्गिङ्ग सुपरस्टार’ आउने « Image Khabar
६ मंसिर २०७८, सोमबार १६:२४
काठमाडाैंमा साेमबार एक विशेष समाराेहकाे आयाेजना गरी सम्झाैतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएकाे छ । पत्रमा ईमेज एचडीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. महेन्द्र विष्ट र नायव महाप्रवन्धक सुरेश शर्मा तथा भ्वाइस स्टार नेपालका तर्फबाट क्रियटिभ डाइरेक्टर रवि श्रेष्ठ र सुरज जोशीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हाे ।
त्यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. विष्टले कार्यक्रमले नेपालको सांगितिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । भ्वाइसस्टार नेपालका क्रियटिभ डाइरेक्टर श्रेष्ठले ईमेज च्यानलले नेपालको सांगितिक क्षेत्रमा पुर्‍याएकाे योगदान उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो ।
ईमेज च्यानलप्रसारणसिङ्गिङ्ग सुपरस्टार